मेरो नाम मंजिल हो घर बुटवल हो मेरो घर भाडामा दिएको छ !त्यहा सबै संग मेरो रामेरो बोलचाल थियो र त्यहा १ जाना बिबाहित आइमाई पनी बस्थिन जो संग म अली बढ़ी बोल्ना खोज्थे किनकी बूढ़ा नभएको भने पछी बोका हरुको मनले पाप त सोचिहल्छा नि म पनी तेशैमै परे तर पनी म खुलेर बोल्ना पाएको थिएन माघ को महिना थियो अली जधो थियो तेसैले सबै जना छत माँ घाम तपना जाने गर्थे १ दिन म घाम मा एक्लै बसी रहेको थिए अनि त्यों दीदी पनी घाम तापना आयो अनि मैले भने दीदी बस्नु घाम ताप्नु भने अनि उ पानी बस्यो तर उसलाई के थाह की मैने कुन तरीका ले भनेको छु अनि मैले सोधे दीदी तपाई को घर काहा हो ? गुल्मी अनि बूढ़ा काहा हुनुहुन्छ नि? मलेसिया अनि कति भयोनी गएको? साढ़े १ बर्ष भयो अनि तपाई चाई किन येह बस्नु भएकोनी? उहालेने बुटवल मई बसेर केताकेती पढाऊ भनेर यहा आको !अनि मलाई त्यो दिदि खुला भयजस्तो भयो अनि मैले भने तेसो भये बूढ़ा ले ता धेरै माया गर्नुहुदो रैछ नीत हैन? उ हास्यो मैले भने दीदी तपाई लाइ कहिले कही बूढ़ा संगै भये हुनेथियो झै हुदैना ? किना नहुनु भाई हाल्छ नि तेसो भये त रातिमा त निकै रुनु हुन्छ की के हो ? किन रुनु ? समझाना आएर ! रुदैन! अनि दिदि घर चै कहिले जानु हुन्छ नि? केटाकेटीको बिदा भए पछि किन र ? प्रस्न गरि उसले ! मपनि जानु छ अलिकति काम छ तेतातिरा तेसैले संगै जाम्ला भनेर ! मलाई लग्नु हुन्छ ? किन नालानु परेको छ र ! हैन कोहि कोहि त तेसै तर्किन खोज्छन तेसैले !
किन तर्किनु जनेभाये हिड्नु नत ! मलाई अलि सजिलो भयो अनि मैले फेरी भने फेरी मसंग जादा तपाई त न राम्रो त हुदैन होलानी त हैन ! किन? हैन कोसंग आई भनेर कसैले केहि भंलानी भनेर ! भन्दैन ! तेसो भय त डरै भएन हैन ? केको डर हुनु नि ! अनि मैले कुरा अन्तै लागे दिदि तपैले त निकै राम्रो खान बनाउनु हुदो रैछ नि त ! किन ? म बाहिर जादा सधै मोठो बास्ना आउछ तेसैले ! तेसै जिस्काउनु हुन्छ तपैले ! हैन साँची भनेको खान दिने भए आउछु क्येरे ! तेसै नजिस्कौनु है ! हैन साँची भनेको दिनु हुन्छ ? मिठो त बनौदैना तर खाने भए आउनु होला ! अनि केके खान दिनु हुन्छ नि ? के दिनु नि खान खान दिन्छु ! मात्र ? अनि के दिनु त ? खान मात्र दिने भए त आउदैन ! अनि के दिनु त भन्नु नत ! मलाई त धेरै कुरा खुवाउने भए मात्र आउछु खुवाउनु हुन्छ ? हुन्छ भन्नु नत ! तेसो भए कति खेर आउ त ? जति खेर मन लाग्छा आउनु न! जति खेर पनि आएता फेरी अरुले संका गर्लान नि त ! के संका ? तेहिता होनी यिनीहरुले के गर्न लागे भनेर ? छी कस्तो कुरा गरेको तपाइले त ! हो भनेको ! कसैले केहि भन्दैन ! तेसो भए तपाई लै डर छैन ? के को डर छैन मलाई ! तेसो भए त जे गरेपनि त भयो नि त ! के जे गरेपनि ? तपाइलाई डर नभए पछि कोठा मा बसेर जे गरे पनि भयोनी भनेकोअब डर नभए पछि के भो त ! तपाई कति मातेको हो ! किन मैले तपाई लाई के गरेको छु र केहि गरेकै छैन कसरि मात्नु ? अनि किन तेस्तो कुरा गरेको त ? अनि तपाई तेही भन्नु हुन्छ त मैले के गर्ने तेसो भए तपाई आफै भन्नु कति खेर आउ ?मैले भनि हाले नि जति खेर आए पनि हुन्छ ! जतिखेर आएपछि त मैले जे पनि गर्छु नि त ! के जे पनि ? मलाई मन लागेको ! अर्काको बुढीलाई जे पनि गर्न पहिन्छ्की केहो ? जति खेर आए पछि त जे पनि त गर्नु पर्यो नीत! तेती सजिलो छ र आर्कालाई जे पनि गर्न ! के भो त राती आउछु अनि जे मन लाग्छा तेही गर्छु आउ त ? न मात्नु न तपाई ! साँची भनेको आउ त ? छि कस्तो हो तपाई त ! त्यो त राती नै थाहा हुन्छा नि त ! अब मा भाग्छु है ! अहिले भागेर के भो त राती मा आई हाल्छु क्येरे ! आर्काको बुढी लाई तेसो भन्न लाज लाग्दैन ? के को लाज म राती आउछु तेती थाहा छ मलाई !
न आउनु है मा risauchu ! के भो त risaye झन् maaza आउछ कति खेर आउ त ? न आउनु के अरुले थाहा हुन्छ हुदैन म बिस्तारै आउछु कतिखेर आऊ त? ११ बजे अनि हाम्रो टाइम फिक्स भयो ! राती म बिरालोलो को चाल म कोठामा गए अनि ढोका ठेलेको त ढोका खुली रहेछा अनि म भीत्र गए र ढोका लगाए केताकेटी लाई kitchen sutayera बसेको रहेछ अनि मेरो पालो म पानी बाघ झै झाम्तिन गए बिस्तारै उसको २ ओता बुबू समौना थाले उसले पानी मलाई साथ दिन थाली मैले मेरो हात उसको हरेक अंग मा लग्न थाले अनि उसको सबै कपड़ा खोलेर मेरो हात उसको पुती मा ke लागेको थिए उ करौना थाली उसको हात लाई मेरो लडो मा रखिदिये अनि उसको पुतिमा मेरो औला हालेर चलाएको त उसको पुती को पानीले त बिस्ताराको तन्ना भिझेछा अनि मैले मेरो लडो उसको पुतिमा राखेर १ धक्का लगाको थे मेरो लाडो ता सुत्त भित्र गयो मैले दनादन दिनथाले उ उस्स्स्सस्स्स ………उस्स्स्सस्स्स्स. ओ गड अजै चिक मलाई मेरो पुतिलाई दुखाई देऊ भन्दै करुना थाली मलाई अजै मज़ा आउदै थियो उ करौदी थी मेरो राजा अजै चिका १ बर्ष देखि को मेरो पुतिको चाहना पूरा गरिदेउन मेरो राजा भन्दै करुना थाली मैले चिक्दै थिए उ कराउदै थिई मेरो राजा पैसा मात्र केहि हैन rahenchh जब मेरो बुढो गएको थियो पैसा त पठाएको थियो तर मेरो पुती लड़ोको लागि निकै तड्पी रहेको थियो तिमीले मेरो चाहना पुरा गरिदियौं अझै चिका राजा उस्स्स्सस्स्स्स… ऊऊऊऊओ… अझै छिटो मलाई तिम्रो आमा बनाऊ ये चिक्नी तैलेता मलाई कति मज्जा ले चिकिस यार भान्दाई थिई मा उफ्रिदै थिय करीब २० मिनट चिके पछी मेरो लाडो ले नौनी फाल्यो अनि मैले उसको पुती माँ पचात्ता पचात्ता फलिदिये अनि उसलाई त्योरत २ पटक चिकेरा माँ सुत्ना गए टेस पछी हामीले दिनौ जसो चिक्ना थालेका थियो तर किना हो कुन्नि करीब ५ महिना पछी उ कोठा सरेर गई तर उ मसंगा नाबोलिकना कोठा सरि तर कारण मलाई थाहा भएन